रंगेलीमा 21 नयाँ कोभिड संक्रमित पाइयो - The Sikkim Chronicle
SC Bureau Dec 25, 202003149
Diki Choden Bhutia Oct 24, 202001815
Sherab Palden Bhutia Feb 23, 202102428
Jul 18, 2020 - 10:11
गान्तोक, 17 जुलाई: सिक्किममा 32वटा नयाँ कोभिड संक्रमण देखा परेको छ। तीमध्ये 21वटा संक्रमित रंगेलीबाट रहेको जानकारी स्वास्थ्य सचिव डा. पेम्पा टी. भुटियाले दिएका हुन्। रंगेलीका संक्रमितमध्ये6जना ग्रेफका कर्मी लगायत ग्रेफ कर्मीका परिवारका 15 जना सदस्यहरुमा संक्रमण पाइएको छ। संक्रमित सबैलाई गान्तोकस्थित एसटीएनएम अस्पतालको कोभिड आइसोलेसन वार्डमा सारिएको छ।
यसका साथै पश्चिम सिक्किमको मेली आचिङ्ग एसएसबी क्याम्प क्वारेन्टाइनबाट7जना संक्रमित पाइएका छन्। संक्रमितहरुलाई गेजिङ आयुष अस्पतालमा रहेको कोभिड आइसोलेसन कक्षमा सारिएको छ। आचिङ्ग एसएसबी क्याम्पलाई कन्टेन्मेन्ट जोन घोषणा गरिएको छ।
रम्फूको स्क्रीनिङमा र्यापिड एन्टिजेन टेस्टबाट3जना संक्रमित पाइएका छन्। तिनीहरुमध्ये दुईजना एक ब्याङ्कको एटीएम मशीनमा पैसा भर्न बंगालबाट सिक्किम आइरहेको वाहनको सुरक्षाकर्मीहरु रहेका छन्। दुवैलाई पोजिटिभ पाइएवापत त्यहींबाटनै फर्काइएको बताइएको छ। अन्य एकजना एसटीएनएमको फ्लू क्लिनिकमा जाँचको क्रममा संक्रमित पाइएका हुन्। सो व्यक्ति चाँदमारी स्थित ग्रेफ क्याम्पबाट रहेको बताइएको छ।
स्मरण रहोस्, ग्रेफ क्याम्प अनि वरिपरि संक्रमण पाइएपछि रंगेली अनि पाक्योङ सब्डिभिजनमा पूर्ण लकडाउन पालना भइरहेछ। यसका साथै रंगेली अनि रिनाकमा र्यापिड एन्टिजेन जाँच पनि चलिरहेको छ। स्वास्थ्य विभागको उच्च टोलीले रिनाक उच्चतर माध्यमिक विद्यालयको महिला होस्टल भ्रमण गर्यो अनि खाँचो परेको खण्डमा लक्षण नभएका कोभिड संक्रमितलाई त्यहाँ राख्न सकिने डा. पेम्पाले बताएका छन्।
सो टोलीले त्यहाँका स्वास्थ्य केन्द्र पनि भ्रमण गर्नका साथै स्थानीय पञ्चायत लगायत विभिन्न सरोकारवालाहरुसँग भेटघाट गर्यो। यसका साथै टोलीले रिनाकको स्वास्थ्य केन्द्र भ्रमण अनि स्थानीय पञ्चायतहरुसँग भेटवार्ता गरी विभिन्न विषयहरुमा बातचीत भएको बताइएको छ। स्वास्थ्य सचिवले कोभिड रोकथामको निम्ति स्थानीय पञ्चायतहरुको योगदानको सराहना गरे। टोलीले दलप्चेन अनि छुजाचेको पनि सो टोलीले भ्रमण गरेको बताइएको छ।
यो समाचार लेखुन्जेलसम्म सिक्किममा सक्रिय कोभिड मामला 166 रहेको छ भने 88 जना निको भएर आ-आफ्ना घर गइसकेका छन्।
Bimal Thapa Nov 23, 20200339
Bimal Thapa Oct 5, 20200974
admin Jun 22, 20200512
SC Bureau Dec 14, 20200383
Bimal Thapa Sep 27, 202001954
Sherab Palden Bhutia Feb 23, 202102477
SC Desk Feb 18, 20210401
SC Desk Sep 18, 20200938
SC Desk Jan 31, 20200872
SC Desk Feb 12, 20200234
SC Desk Feb 28, 20200248
SC Desk Sep 8, 20200946
SC Desk Jul 4, 20200170
Rohonit Hang Subba Jul 24, 20200238